Somaliland iyo dilkii Godane: Xaqiiqda dhulkaa ka jirta ee dadka aysan ogeyn |
Somaliland iyo dilkii Godane: Xaqiiqda dhulkaa ka jirta ee dadka aysan ogeyn
Shaki kuma jiro in Hoggaamiyihii ururka Al-Shabaab Axmed Cabdi Godane oo 37 sano jir ahaa taariikh xun iyo raad aan la hilmaami doonin uu ku reebay bulshada Soomaaliyeed ee Koonfurta iyo Bartamaha ku nool.
Axmed Godane, wuxuu leeyahay taariikh fog oo dhanka waxa ay ugu yeeraan Jihaadka laga soo bilaabo Afghanistaan ilaa Somalia, hase ahaatee ay muhiim tahay inaan ka xuso in yar oo ku saabsan qaabkii uu kusoo galay Muqdisho.
Axmed Godane oo dhalasho ahaan kasoo jeeda gobolada Waqooyi ee Somalia, wuxuu isagoo baxsad ah yimid Muqdisho, markii dilal iyo afduubyo ay kula kaceen shaqaale u shaqeynayay Hay’addaha samafalka ee ka howlgalayay Hargeysa, Boorame, Sheekh, iyo Burco iyagoo fulinayay fariinta Al-Qaacida oo xiligaasi uu waday Ibraahim Xaaji Jaamac Meecaad “Ibrahim Afghan” oo Afghanistan ka yimid sanadkii 2002 qiyaas ahaan.
Maamulka Somaliland ayaa xiligaasi kadib, xukun ku riday rag uu ku jiray Axmed Godane iyo Ibrahim Afghan, waxayna soo galeen Muqdisho.
Axmed Godane iyo Ibrahim Afghan waxaa Muqdisho kusoo dhoweeyay Saaxiibkood Aadan Xaashi Ceyrow oo ka mid ahaa xubnihii maamulayay maxkamaddii beesha Ceyr ee Ifka Xalane, oo markii danbe saldhig u aheyd in ay aas aasmaan ururkii maxaakiinta.
Xiligaasi wixii ka horeeyay, Hoggaamiye kooxeedyadii Muqdisho qaarkood, wey ka war qabeen arrimaha hoose iyo halista rag uu ka mid ahaa Aadan Xaashi Ceyrow oo saldhig u ahaa xubnaha Godane iyo saaxiibadiisa, walow si hoose loogu ugaarsanayay, markii Muqdisho ay kaga dhawaaqeen Ururkii Argagixiso la dirirka Hoggaamiye kooxeedyadii, oo aakhirkii burburiyeen Maxaakiintii, lagalana wareegay hubkoodii.
Lix bilood kadib, waxaa burburay awoodii maxaakiintii, oo gacantoodii ka baxday Muqdisho, gudahana ay usoo galeen ciidamadii Itoobiya, iyo Dowladdii KMG ee Cabdullaahi Yusuf, hase ahaatee Muqdisho lagama soo dhoweyn, waxayna MAxaakiimt isu badashay ii la wiiqay awoodoodii isu badaleen Muqaawamadii Ciraaq iyo Afghanistan oo kale.
Garabkii Aadan Xaashi Ceyrow iyo Axmed Godane ee ku xernaa al-qaacida, waxay si rasmi ah u hirgiliyen ururka Al-Shabaab, walow uu si hoose u shaqeynayay xiligaasi ka hor, afkaartiisana aheyd mid marba marka ka danbeysa sii fogaaneysay.
Aadan Xaashi Ceyrow oo hoggaanka taliska Al-Shabaab hayay, ayaa duqeyn ka dhacday Dhuusa-mareeb lagu dilay 2008, xiligaasi wixii ka danbeeyay awooda Al-Shabaab waxay u gacan gashay Axmed Godane.
Sanadkii 2012-kii waxaa muran uu dhex maray Axmed Godane iyo xubno ay ka mid ahaayeen Ibrahim Afghan iyo Sheekh Xasan Dahir Aweys, wuxuuna markiiba uu ku dhawaaqay inuu heshiis la gaaray urur Weynaha Al-Qaacida, kana mid noqdeen garab ka mid ah.
Godane waxaa lagu tirayaa in uu yahay shaqsi jecel inuu taliyo, amarkiisana qofkii ka horyimaada xarig ama dil uu kula kici jiray sida ku dhacday Saraakiil Soomaali iyo Ajaaniib isugu jirta oo qaarkood la dilay, qaarna isaga baxay Al-Shabaab iyagoo nafsatadooda ugu baqaya Axmed Godane.
Sidee looga arkay Somaliland geerida Godane?
Mas’uuliyadda qaraxyo ismiidaamin ah oo Hargeysa ka dhacay sanadkii 2009 bishii Oktoober, xiligaasi wixii ka danbeeyay, waxaa la sheegaa in Axmed Godane ay ilmo ugu dhasheen magaalada Hargeysa, oo mid ka mid ah xaasaskiisa ay ku nooshahay, caruurta ugu badana ay ku nool yihiin.
Geeriddiisa markii ay soo shaac baxday, Maamulka Somaliland wax war ah kama soo saarin, waxayna arintaasi muujisay shaki badan, taasoo markii danbe ku kaliftay in Somaliland ay ka jawaabto ilaa Wasiirka Warfaafinta Somaliland uu si jees jees ah ugu hadlay isagoo Wariyeyaasha ku yiri “Anaga Shabaab wadankeena ma joogaan!, meesha la duqeeyayna ma ahan dhulkeena, ciddii duqeysayna ma nihin”, hadalkaasi kadib.
Wasiirka arrimaha gudaha Somaliland ayaa soo saaray hadal kooban oo u muuqda inuu taageersan yahay dilka Godane kaddib shabakad laga leeyahay Boorama oo Lagu magacaabo Harowo.com oo is waydiisay sababta Somaliland uga aamustay dilka Godane.
Baashe Cabdi Godane oo ah Da´da ka weyn Axmed Godane oo shir jaraa’id ku qabtay Hargeysa ayaa isna sheegay in walaalkii uu u shahiiday difaaca diinta iyo sharafkiisa, Alle agtiisana sharaf maanta u taal.
Guud ahaan shacabka Somaliland ilaa madaxdooda ayaa maanta qaba in Godane uu ku dhintay wato toosan, oo xaqa ku taagan, iyagoo si wada jir ah u taageersanaa.
Madaxweyne ku xigeenka Puntland wuxuu Somaliland ku eedeeyay inay tacsi iyo baroordiiq u sameeyeen Axmed Godane, taasoo uu ku sheegay in ay tahay wax laga xumaado, loogana baahan yahay inay ka digtoonaadaan.
Ujeedada iyo xikmada laga dheehan karo inay taageeraan Hoggaamiye Argagixiso oo fal dambiyaadka kan ugu xun, ee bulsho dhan halis ku ahaa galay ayaa ah inay sii daba dheeraado fowdada ka jirta Somalia si ay u soo dedejiso in caalamka ay ka helaan aqoonsi dal ka madax bannaan Somalia.
Ugu danbeyn, Hoggaanka cusub ee xilka uu ka dhintay Godane, waxay bulshada Kuunfurta Soomaaliya u arkaan mid ku yimid dardaarinkii uu jeediyay Axmed Godane sida laga dheehan karay hadalkii ugu danbeeyay ee uu jeediyay oo uu ku sharaxayay in loo baahan yahay hoggaan, wax uu ku sheegay haddii caddowga uu bartilmaameedsado sida Hoggaamiyeyaashii Ciraaq iyo Afghanistaan in la helo, isagoo farta ku fiiqay ninka ay dhiiga wadaagaan ee la magaciisa badalay, lana magac baxay Sheekh Axmed Cumar (Abuu Cubeyda), kaasoo uu u arkay inuu hadafkii uu ku taagnaa sii wadi karo.